Maka onye a na-eji Mac Pro eme ihe na ihe ọgbọ ọhụrụ kwesịrị iweta | Esi m mac
Maka onye a na-eji Mac Pro eme ihe na ihe ọgbọ ọhụrụ kwesịrị iburu
Gbaso iwebata nke ọhụrụ 2016 MacBook Pro, Ọtụtụ ndị ọrụ na-eche ma laptọọpụ Apple Pro ọ bara uru n'ezie kwa ụbọchị ma ọ bụ na ha ga-achọ igwe ka mma karịa. Ihe niile yiri ka ọ na-egosi na igwe ahụ nke Apple ahaziri dị ka MacBook Pro, bụ "otu maka ihe niile": ergonomic, light (ka ọ bụrụ nsụgharị Pro), yana arụmọrụ dị mma. Mgbe ahụ, Anyị achọrọ Mac Pro?
Ọfọn, nke a bụ ajụjụ Apple kwesịrị ịjụ, ebe ọ bụ na ụdị kachasị ọhụrụ nwere ụbọchị ntọhapụ nke 2.013 ma nwee ezi uche na teknụzụ amalitela kemgbe ahụ, ọkachasị n'ihe ndị chọrọ ụfọdụ ngwa. N'otu akụkụ, Apple ga-enwerịrị ndị otu ọfụma dịka ndị isiN'aka nke ọzọ, ọnụọgụ ndị ọrụ ga - azụta ngwa a pere mpe.
Onye ọrụ ahụ jụkwara otu ajụjụ ahụ. Ole na ole ọrụ nwere ike iri uru nke a igwe dị ka Mac Pro. Anyi na ekwu maka ìgwè nwere isi anọ ma ọ bụ isii, 12 ma ọ bụ 16 GB nke Ram, gbasaa ruo 64 Gb na eserese AMD abụọ. Ya mere, naanị ndị editọ vidiyo ma ọ bụ ndị na-eme ihe nkiri ga-achọ igwe dị ike dị otú ahụ.
Ajụjụ ọzọ anyị ga-ajụ onwe anyị bụ ma Mac Pro dị ugbu a na-arụrụ anyị ọrụ taa ma ọ bụ Apple ọ kwesịrị ịgbanwe. Dika anyi guru, nu ma juo ndi oru, Apple kwesiri igbanwe n'ihi ihe abuo, ma n'etiti ha abughi ikike, nke kwesiri.
Ihe mbụ kpatara ya bụ taa ngwa na mmekọrịta ha na eserese eserese. Usersfọdụ ndị ọrụ na-eme mkpesa banyere enweghị nkwekọ akụrụngwa na ọnwa mbụ nke ndụ. Nke a sitere na ụfọdụ enweghị nkwekọrịta dị n'etiti eserese na ụfọdụ mmemme post-mmepụta. Ndị kasị achọ Apple mmemme dị ka: Final Cut Pro ma ọ bụ Xcode, -aga na ngụkọta ala na a igwe. Mana ọ bụrụ na anyị ejiri mmemme Adobe ma ọ bụ Da Vinci Resolve, ihe na-agbanwe. Na nke a, ihe ngosi Nvidia na-eme nke ọma karịa ndị AMD na Mac Pro.
Ihe nke abuo kpatara ya bu kọmputa usoro. Ekwesịrị m ikweta na imewe ahụ bụ n'uche m, nke kachasị mma nke Apple mebere n'akụkọ ihe mere eme ya niile. Mana usoro "ahịhịa" abụghị nke kacha arụ ọrụ maka kọmputa nwere njirimara ndị a. Nke mbụ, n'ihi na ọ na-efesa obere okpomọkụ na nke abụọ n'ihi na ọ dịghị mfe ịnweta ya, yana ngbanwe na nhọrọ nke ihe mejupụtara.
Y Kedu ihe ọgbọ ọhụrụ nke Mac Pro kwesịrị ibu? Na ụkpụrụ, ụdị "bin" ekwesịghị imerụ ahụ nke ukwuu, ebe ọ bụ na ndị na-arụ ọrụ ugbu a na-arụ ọrụ nke ọma ma na-echekwa ume ma ya mere na-eweta obere ọkụ. Ihe kwesiri inwe kwesiri inwe ihe ngosiputa ma gbasaa Mac. Ọfọn, enwere ọtụtụ ndị ọrụ na nke ọ bụla nwere mkpa nke ha. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ịme MacBook Pro yana ndị nhazi dị iche iche, RAM ma ọ bụ ikike diski ike, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịnweta ya na Mac Pro. mepee onye ofufe ahu dika i nwere ike, ya na ndi nhazi di iche-iche, eserese na ike nile di iche iche.
N'ime ọnwa ndị na-abịanụ, anyị ga-enwe azịza na ma Apple ọ na-emelite Mac Pro yana n'okpuru ọnọdụ. Si m si Mac anyị ga-agwa gị dị ka mgbe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Maka onye a na-eji Mac Pro eme ihe na ihe ọgbọ ọhụrụ kwesịrị iburu
O bu ihe nwute, ihe akuko ahu adighi etinye aka na ntinye vidiyo ... ihe kariri nani ojiji nke FinalCutPro X ...
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ kọmputa nke oge a malitere, ahịa ọkachamara na-achọwanye ike yana. Site n'onwe ya na vidiyo anyị esila na-arụ ọrụ site na PAL gaa FullHD na ugbu a na 4K 5k ... na ndị ọzọ ...
Dị ka ihe atụ na kpọọ naanị After Effects ụdị mejupụtara isiokwu, a mejupụtara nke a ole na ole n'ígwé na 4k bụghị nanị na-achọ a otutu nke na ebe nchekwa na nchekwa, kamakwa a anụ ọhịa nhazi na-enwe ike ịga na a kacha nta nke ala na maka nhazi ikpeazụ. ex: (1 4k oyi akwa kwekọrọ na 4 FullHD oyi akwa… Dịka ọmụmaatụ, rụọ ọrụ na 6 4K layer = 24 FullHD layer). Ghara ikwu banyere ịrụ ọrụ n'ụdị a na-eweta 3D sụgharịrị ...
Nkwado nke eserese eserese maka nke a bụ ihe ọhụụ taa, mana ọ dị nwute na ọtụtụ sọftụwia ọkachamara na-arụ ọrụ na kaadị NVIDIA na-akwado CUDA. . . na Apple anaghị etinye eserese eserese ndị a na kọmpụta ọ bụla.
Ọkachamara ọkachamara na-achọwanye ike, ahịa 3D na ihe ndị na-esi na ya na-eto mgbe niile.
A ka nwere nnukwu ụwa ebe CPU chọrọ ma ọ bụghị naanị GPU ... na ebe Apple anaghịzi enye gị ohere ịrụ ọrụ nke ọma maka ịghara iwepụta igwe ndị kwesịrị ekwesị. iMacs? ... na-achị ọchị.
Achọpụtara m na ọ na-atọ ọchị etu Apple si tinye akara ngosi Pro na ihe ndị na-achọ nhazi karịa arụmọrụ. Ebe ikike onye oru ya na-egbochi oke nke nhazi ya, na otu mpako ya si ekpebi otu anyi agha oru na ihe ya ...
E nwere ihe omume pedantic na ọbụna Microsoft na ndị ọzọ na-ewu ụlọ na akara nke Apple na-agbasoro, nke dị m ka ọ bụ mmejọ na ọkwa ọkachamara. Mepụta igwe mara ezigbo mma tupu oge ha.
Ka m jiri ihe atụ dị mfe kọwaa:
Etu esi etinye na kọmpụta mara ezigbo mma ma dịkwa nro nke na-enye ohere ịnwe ebe nchekwa, CPU, Ihe eserese, Ọdụ ụgbọ mmiri, Nchekwa dị ike maka ọrụ ọkachamara? Naanị agaghị ekwe omume na teknụzụ dị ugbu a.
Gịnị mere nile Apple laptọọpụ mgbe overheated? ma ọ bụ ịkọwapụta, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwe ha niile nwere nsogbu a mgbe ọ na-arụ ọrụ n'ezie ... iMacs na MacPro kachasị ọhụrụ ... ma ọ B NOTGH NOT ụlọ ochie ha ochie MacPro ... a naghị emegharị atụmatụ ha na ihe ezubere ...
Will ga-agwa m, naanị gaa PC ... ọ dị mma ee! ... ma gịnị banyere nzọ nke ndị maqueros niile ikwere na sistemụ arụmọrụ dị mfe ma dị irè ... na ebe ndị mmadụ tinyere oge na ego na ngwanrọ na ngwaike nke a ga-edochi n'ihi na ha na-arụ ọrụ na mac ... ghara ikwu banyere ịdị mfe na ahụmịhe enwetara… ???
GUCỌ !, NA-ezuru ... ma ọ dị mwute ... ma ana m agbatị oge ahụ, ruo oge ọkọchị ebe usoro Intel processors na-etinye MacPros n'ọrụ ga-apụta, ... mana ọ bụrụ na enweghị nkwenye PRO kwenyesiri ike site na Apple. .. ghara ịbụ onye na-azụ laptọọpụ ma ọ bụ iMac ... UGBU A, dị ka Onye Ọkachamara ... M na-enye!
Amaghị m ma ọ bụrụ na enwere m chi ọjọọ ... ma ọ bụ na naanị m etinye ihe ọjọọ! mana dị ka ọkachamara n'ihe onyonyo, na mgbakwunye na nsogbu ngwaike nke ugbu a ... m sitere na mkpisi mgbe osisi sitere na Apple ...
N'ọmụmụ ihe m na ndị ọkachamara na ọkwa kwa ụbọchị, m jiri:
Agba, maka agba agba, Apple gburu ya!
FinalCutPro,… enweghị nkọwa banyere ntụgharị na FCPX!
Aperture… M na-egbu ya!
My software kacha mma bụ Shake,… ọ gburu ya!
na ugbu a ọnụ ọgụgụ nke softwares m na-eji maka ma 3D na mmetụta naanị nkwado
NVIDIA na Apple kaadị Mba!
na-ezughị ihe mere ka na- ... .. Apple?
Ike gwụgola m ... na n’eziokwu dị ka maquero na m bụ, ana m ahapụ ya!
Zaghachi na deadpixelx
Enweela m akwụkwọ ndetu nke Apple na Pro ebe ọ bụ na 2001 ... na "n'echiche m" na-ebupụta okpomọkụ iji ghee akwa n'elu aluminom ka ọ dị ntakịrị. (na-enweghị ikwubiga okwu ókè… ref: youtube).
Mgbe ebumnuche ha ka ha bụrụ laptọọpụ ewepụtara maka ndị ọkachamara ... Echere m na imewe ahụ ga-emegharịkwuwanye iji.
A ghaghị ịchụ àjà n'usoro ma ọ bụghị ịrụ ọrụ. Ihe kachasị njọ bụ na nsogbu ahụ na-emeghachi onwe ya n'ọgbọ ọ bụla ...
Ekwela ka m mehie, M na-amasị Apple si visual imewe, M nnọọ esthetic, ma ọ bụghị iji mebie nzube ya. Nke ahụ bụ mkpesa m.
Ndị ọrụ Mac na-ahọrọ maka ihu mgbe ndakpọ olileanya nke MacBook Pro ọhụrụ ahụ
Mbibi mbụ, mgbe ahụ kpọọ piano, ugbu a Pac-Man na Lemmings, ojiji ọhụrụ nke Touch Bar